4 hours ago जीवनशैली 0
डाक्टर साब म ३७ बर्षीय बिबाहित महिला हुँ । सन्तानको रहर हामी दुवैमा औधी थियो र छ । बिबाह भएको १० बर्ष बित्यो। बच्चा नभएपछि श्रीमान् र मेरो दुवैको परिक्षण गर्दा श्रीमानको पक्षबाट पूर्ण रुपमा काम नगर्ने थाहा भयो । यो कुरा डाक्टरले मलाई मात्र भन्नु भएको थियो । उहाँलाई …
राति सुत्दा हामीले विभिन्न सपनाहरू देख्ने गर्छौ । सुख शान्ति प्राप्त गर्न रातिको निद्रासँग गहिरो सम्बन्ध रहने गर्छ । यदि राति सुत्दा अप्ठ्यारो पर्‍यो वा निद्रा परेन भने शरीर आलस्य हुन्छ । शरीरमा थकान महसुस हुन्छ । शरीरको थकान मेटाउन रातिको निद्राले मात्र सम्भव हुन्छ । शास्त्रका अनुसार सुत्ने समयमा …
7 hours ago जीवनशैली 0
गर्भमा रहेको बच्चाले पेटमा लात हाने जस्तै गरी चल्छ भने बच्चा स्वस्थ्य र सक्रिय छ भनेर बुझ्नु पर्छ । बाहिरी बाताबरणसंग पनि प्रतिक्रिया दिएको छ :- यस्तो पनि भनिन्छ कि बच्चाले गर्भको बच्चा पनि बाहिरी बातारबणसंग घुलमिल भइरहेको हुन्छ । बाहिरी बाताबरणमा हुने परिवर्तन प्रति उसले प्रतिक्रिया जनाउछ । बाहिरको …
13 hours ago जीवनशैली 0
हिन्दु धर्ममा महिलालाई घरको लक्ष्मी मानिएको छ । जुन घरमा महिलालाई पुरै सम्मान मिल्छ उसको घरमा कहिल्यै पनि धनको कमी हुँदैन । लक्ष्मी त्यही निवास गर्छिन्, जहाँ महिलाको इज्जत हुन्छ । घरमा स्त्रिले गरेको साना साना कार्यले पुरै परिवारमा प्रभाव पर्छ । आउनुहोस् केहि यस्ता उपाय बारे चर्चा गरौ, जसको …
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । श्रीमान श्रीमतीबीच शिष्टाचार वा म्यानरर्स जस्ता औपचारिकता किन आवश्यक छ ? तर श्रीमान श्रीमतीबीच सानो तिनो झगडा, मनमुटाव हुने कारण यहि नै हो । आपसमा अशिष्ट भाषाको प्रयोग गर्नाले अन्जानमा एकअर्कालाई अपमानित गरिरहेका हुन्छन् । यस्तोमा केहि कुराको ख्याल राख्नुपर्छ । जसले सम्बन्ध बलियो मात्र …
काठमाडौं । महिला वा युवतीको सौन्दर्यतामा युवतीको छातीले पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्छ । तर समय नपुग्दै अथवा जवान हुँदै छाती झोलिएमा युवतिको सौन्दर्य बिग्रिन सक्दछ । सबै बाहिर खुलेर आउँदैनन् तर युवतीहरुलाई पनि आफ्नो छातीको बारेमा चिन्ता हुने गर्दछ । कपडा लगाउँदा पनि ठाउँमा छाती नदेखिएर झोल्लेरी परि रहने समस्या …
गुल्मि जिल्लाको इस्मा गाउपालिका ,साउदिमा भोजराज कुमाल करिब आठ महिनाबाट जीवन बेथित गरिरहेका छन् ।काम गर्ने क्रममा मेसिनमा दुबै खुट्टा परेपछि उहाले दुबै खुट्टाहरुमा एकदमै ठुलाठुला घा उहरु लागे र एउटा त पुरै निष्क्रिय अवस्थामा छ । आमा बुवाका साथमा दुई छोराछोरी बस्दै आएका छन् ।घरबार नभएको उक्त परिवार अहिले …
घरको मेन गेट अगाडी कहिले पनि नराख्नुहोस् यी कुरा, नत्र हुदैन कहिल्यै प्रगति!
हरेक मान्छे आफ्नो घरमा सुख-सम्बृद्धि चाहन्छन् र त्यसका लागि फरक फरक जतन पनि गर्छन्। मान्छे जति समस्यामा र हारेको, थाकेको होस् जे भएपनि उनीहरु घर फर्कन चाहन्छन्। तर कहिले-काहिँ पुजापाठ देखि वास्तुको अनुसार घर बनाए पनि लक्ष्मी रिसाउछ्न। यसको जिम्मेदार तपाईको घरको आसपासको चिज हुन सक्छ । घरमा सुख-शान्ति एवम …